जुत्ता चो’र्न पुगेकी युवती आफू सिसी क्यामेराको निगरानीमा रहेको थाहा पाएपछि य’स्तो सम्म गरिन (भिडियो सहित) -
Home News जुत्ता चो’र्न पुगेकी युवती आफू सिसी क्यामेराको निगरानीमा रहेको थाहा पाएपछि य’स्तो...
कतै तपाईं`को चोरी गर्ने बानी त छैनरु चोरी गर्ने बानी एक किसिमको मानसिक रोग हो । यस रोगबाट पी`डित रोगी साधारण चोरको जस्तो समाजकोलागी खतरा या घातक हुँदैनन् । किनभने ऊ कुनै व्याक्तिगत फाईदा या जीवनयापनको लागि भनेर चोरी गर्दैन ।
अक्सर यस्ता मानि`सहरु साधन सम्पन्न हुन्छन् र त्यतिकै आत्मसन्तुष्टीको लागीमात्र आफूलाई मनपरेको सामान चोरी गर्ने गर्दछन् । जुनवस्तुको वास्तवमा उनिहरुलाई आवश्य`कता पनि हुँदैन ।
चोरी गरिसकेपछि यिनिहरुलाई एककिसिमको आनन्दको अनुभुति हुन्छ । पुरुष`हरुको तुलनामा महिलाहरुमा यस किसिमको चोर्नेबानी बढी नै हुन्छ । कानूनि कार`वाई तथा लोक`लाजको डरले गर्दा मानिस यसको उप`चार गराउन मान्दैनन् र पन्छिने गर्छन् । यसको मुलभुत समस्या भनेको रोगी स्वंय आफूलाइ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन । नत स्वंय आफ्नो विवेकले काम गर्न सक्छन् ।
यस बानीले यिनिहरुलाई आत्मग्लानि, डर, स्वंय`लाई दोषी मान्नु, भित्र अन्तरद्वन्द्व चल्नु जस्ता भावनात्मक समस्याहरुबाट लगातार पीडित भइरहेका हुन्छन् । परिवारजनलाई पनि समाजमा लज्जितहुनु पर्ने हुन्छ ।
यो पढ्दा शायद तपाईं`लाइ हाँस्यपद कुरा लाग्छ होला तर यो समस्याको भयावता त मात्र यसबाट पीडित रोगी तथा रोगिको परिवारले मात्र बुझ्न सक्छन् । विदे`शमा पनि चर्चित हस्ति`हरु जस्तै बेलायतकी महारानी जोर्ज पाँचौं, केही प्रख्यात फिल्म अभिनेत्रीहरु पनि यस केलेप्टोमे`निया डिसअर्डरको शिकार भएका थिए ।
नेपालमा यस सम`स्या प्रति जाग`रुकताको कमी छ तथा चोरी गर्नुलाई ठूलै अपराध मानिन्छ । चोरी गर्दा पक्राउ पर्योम भने बदनामी हुनुको साथै कहिले काँही त गाली(गलौज तथा मारपिट हुने अवस्था पनि आउँछ । यस्ता व्यक्ति`हरुको उचित समयमा सहि ढगंले उपचार गराउने र बिरामीलाई आपसी सहयोग दिने हो भने निश्चित`रुपले यस समस्या`बाट छुटकारा मिल्न सक्छ ।
यस समस्या`लाई हल्का|रुपमा लिनु भने हुँदैन । यस रोगबाट पीडित व्यक्तिसगं टाढा भएर, उसको बहिष्का`र गर्नु हुँदैन । यस रो`गको उपचार गाली गरेर या त्यस व्यक्तिको बेईज्जत गरेर हुँदैन । यहाँ पनि विभिन्न चोरीको भिडियो हरु समेटेर भिडियो तयार गरिएको छ । हेरौ उक्त भिडियो
Previous articleसारै दु:खको ख:बर ! शो’कमा डुब्यो नेपाल, ठुलो मानवीय क्ष’ति, ८७ जनाको मृ;त्यु, २८ बेपत्ता ! (भिडियो हेर्नुहोस)
Next articleअस्पताल भर्ना गराएर आफन्तहरु फर्केर आएनन्, उनले चारा खुवाएर हुर्काएको परेवा यसरी खोज्दै आयो